Ruushka oo Yareynaya Ku Tiirsanaanta Doolarka. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Ruushka oo Yareynaya Ku Tiirsanaanta Doolarka. (Warbixin)
January 12, 2020 1:52 pm by admin Views: 54
Falanqeeyayaasha dhaqaalaha ee wadanka Ruushka ayaa waxay ka faalloonayaan sidii dalkaasi looga yareyn lahaa isticmaalka lacagta Doolarka Mareykanka.
Warbixin ay daabacday mareegta “News. Rey” ee ruushka, wuxuu sheegay in khubaradu ay sheeganayaan in natiijada ugu weyn ee sanadkan ee dhaqaalaha Ruushka ay tahay koritaanka gaabiska ah.
Tani badanaa waxay u sabab tahay laba arrin, midi waa dagaalka dhaqaalaha ee dibadda uga imanaya iyo tan labaad oo ah xaalada xun ee maalgashiga iyo jawiga ganacsiga, marka lagu daro siyaasada maaliyadeed ee aadka u adag iyo canshuurta la kordhiyay ee ganacsatada.
Sida laga soo xigtay nin Professor ka ah Machad dhaqaale, Valery Chernoki, dhaqaalaha Ruushka ee sanadka 2019 guud ahaan wuu xasilloonaa, sababtuna waa isku dheelitirka siyaasadaha dhaqaale iyadoo aad looga taxadarayay Doolarka.
Ruushka wuxuu rumeysan yahay in kaqeybgalka Russia ee heshiiska OPEC si loo yareeyo soosaarka, wuxuu gacan ka gaystey xasilloonida qiimaha saliida caalamiga ah, iyo furitaanka habka lagu yareynayo deynta shidaalka ee dheeriga ah ee bishii July ee sanadkii hore taasoo keentay in si weyn hoos loogu dhigo isbeddelada sicirka shidaalka.
Sicir barar mar ka dillaacay wadanka ayaa waxaa loo sababeeyay koror ku yimid canshuurta oo lagu daray 20%.
Dhanka kale, saamaynta taban ee korodhka VAT ma ahayn mid adag oo muddo dheer, sidii la filayay.
Qoraaga warbixinta ayaa intaa ku daray in sanadka 2019 loo asteeyey dhacdooyin taxane ah oo si xun u saameeyay jawiga maalgashiga ee Russia isagoo xigasho sameynaya.
Dhanka kale, isbeddelada hab-nololeedka iyo talaabooyinka dowladda ee lagula dagaallamayo isticmaalka khamriga iyo tubaakada iyo hagaajinta daryeelka caafimaadka ayaa la bixiyay.
In kasta oo ay jiraan tallaabooyin loogu talagalay in lagu taageero badinta taranka, haddana heerka dhalashada ayaa hoos u dhacay sanadka 2019, waxaana loo sababeeyay xaaladda dhaqaale ee hadda ka sii daraysa ee qoysaska da ‘yarta ah iyo filashooyinka taxaddarka leh ee la xiriira dakhliga mustaqbalka, iyo sidoo kale isbarbar dhigga siyaasadaha gobolka.
Ruushku wuxuu sheegay in horumarka dhaqaalahooda uu ku xiran yahay iyagoo marka hore iska yareeya lacagta Doolarka waxayna amaaneen dalal badan oo soo koraya kuwaas oo muddo dheer isku dayayay inay yareeyaan ku tiirsanaanta dollarka Mareykanka.
Dhanka kale, Guddoomiyaha Bangiga England Mak Karney ayaa xagaagii hore wuxuu ugu yeeray madax kale oo ka tirsan bangiga dhexe inay xaddidaan doolarka iyagoo adeegsanaya lacagaha dijitaalka ah.
Xilli wadamada caalamku xal u arkaan iney ka guuraan Dolarka Mareykanka ayaa haddana Soomaaliya waxay aad u isticmaashaa Dolar, iyadoo meelaha qaar lagaba diiday shilinka Soomaaliga, tanina waa qeyb kamid ah sicir bararka ka taagan gobollo badan.